जतिसुकै बिजि भएपनी २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढ्नुहोला नपढे तपाईंलाई पछुतो हुनेछ ! – AB Sansar
October 6, 2020 adminLeaveaComment on जतिसुकै बिजि भएपनी २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढ्नुहोला नपढे तपाईंलाई पछुतो हुनेछ !
बुढेसकालको लाठी बुहारी
हामीले प्रायः सुन्दै आइरहेका छौ कि छोरा बुढेसकालको लाठी हुन्छ। त्यसैले त मान्छेहरू आफ्नो जिन्दगीमा एक छोराको लागि रहर गर्छन् । ताकि बुढेसकाल राम्रो सँग काट्न सकियोस् । यो कुरा पनि सहि नै हो ,किनकि छोराले नै घरमा बुहारी ल्याउछ । बुहारिको आगमन पछि , एउटा छोराले लगभग आफ्नो सारा जिम्मेवारी बुहारिको काँधमा थुपार्दिन्छ । *** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ***
र त्यसपछि बुहारी बन्छिन आफ्नो बुढा सासू-ससुराको बुढेसकालको लाठी । हजुर हो , म यो कुरा मान्छु कि,
उन बुहारी नै हुन्छिन जसको साहारा बृद्ध सासू-ससुरा ले आफ्नो जीवन ब्यतित गर्छन् । एउटि बुहारिलाई आफ्नो सासू-ससुराको पुरै दिनचर्या थाहा हुन्छ । को कतिखेर चिया पिउछन , सासू-ससुराको लागि कुन खाना कतिबेला बनाउनुपर्छ ।
दिउँसो नास्ता के दिनुपर्ने , र बेलुका हरहालतमा ८ बजेभन्दा अगाडि खाना बनाउनुपर्छ ।
यदि सासू-ससुरा बिरामी भएभने पुरै तनमन लगाएर बुहारिले स्याहारसुसार गर्छिन ।यदि एक दिनको लागि बुहारी भैनन भने,
या काहीँ काम विशेष ले गइनभने , बिचरा सासू-ससुरालाई यस्तो लाग्छ कि जस्तो उनिहरुको लाठी नै कसैले खोसिदियो ।
उनिहरु चिया नास्ता देखि खानाको लागि छट्पट्याउछ्न..
कसैले उनिहरुलाई भोक लागेको छ भनी सोध्दैनन । किनकि छोराको त फुर्सद नै हुदैन ,यदि छोरालाई फुर्सद भएपनी उ त केही गर्न सक्दैन कि आमा बुबालाई बिहान देखि बेलुकासम्म कुन-कुन खाना दिनुपर्छ भनेर ।
किनकि छोराले छोटो प्रश्न गर्छ र उसको बुबा आमा प्रतिको जिम्मेवारी सकिन्छ । जस्तै: आमा बुबाले खाना खानुभयो? चिया पिउनुभयो? नास्ता गर्नुभयो? तर कहिले पनि यो बुझ्ने कोशिश गर्दैन कि उहाँहरू के खाने गर्छन् , कसरी चिया नास्ता गर्छन् ।….
यो लगभग हामी सबैको घरको कहानी हो मैले त यस्तो धेरै देखेको छु , आफ्नो सासुको बिरामी मा त तनमन ले सेवा गर्ने गर्छिन । जसले एउटा बच्चा जसरी , जस्तै बच्चाहरु आफ्नो सबै काम आफ्नो ओछ्यानमा गर्छन् । ठिक त्यसरी नै उनको सासुले पनि गर्ने गर्छिन र बिचरी बुहारी ती फ़ोहोरहरु घिन नमानी साफ गर्ने गर्छिन ।….
र छोरा यो देखेर तर्केर भाग्ने गर्छ,कि आफ्नो आमालाई यस्तो हालतमा हेर्न सक्तैन । त्यहीँ भएर उनिहरुको नजिक जाँदैन , यस्तो कयौं बुहारिको उदाहरण छन् । मैले आफ्नो आमा र काकिले हजुर बुबा-हजुर आमालाई यसरी सेवा गरेको देखेको छु । यस्तो कयौं उदाहरण तपाइँहरुले पनि देख्नुभएको होला ।
तपाइँहरू मध्य कति बुहारिहरुले, आफ्नो सासू-ससुरा लाई यसरी नै सेवा गर्नुभएको होला या गर्दै हुनुहुन्छ ।कहिलेकाही यस्तो पनि हुदोरहेछ किछोराले यस संसार छाडेर जान्छ, त्यसबेला बुहारी नै हुन्छिन जसले उसको आमा-बुबाको सेवा गर्छिन । आवश्यक पर्दा बाहिर काम पनि गर्छिन ।
तर यदि बुहारिले संसार छाडेर गएकी छिनभने छोराले एउटि दोस्री बुहारी लिएर आउँछ । किनकि उसले आफ्नो आमा बुबाको सेवा गर्न सक्दैन । उसलाई आफै उन बुहारी नामको लौरो को जरुरत पर्छ । त्यसैले त म बिश्वास गर्छु कि बुहारी नै हुन्छिन । बृद्धअबश्थाको असली लाठी , तर अफसोच बुहारिको त्याग र सेवा उनिहरुले पनि देख्दैनन जसको लागि दिनरात भाग-दौड गरि रहन्छिन ।
भारतमा एकैदिन थपिए ५३ हजारभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित
February 3, 2021 Ab-संसार
नयाँ मोटरसाइकल लिएर घर फर्किरहेका दाजुभाइको दु’र्घ:टना’मा परी मृ’त्यु